माईग्रेसन एजेन्ट छान्नुअघि के गर्नुपर्छ ? आधिकारिकता कसरी जाँच गर्ने ! « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियामा आप्रवासन सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नकालागि निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई माईग्रेसन एजेन्टका रुपमा काम गर्न स्वीकृति दिइएको हुन्छ । यी माईग्रेसन एजेन्टहरुले सेवाग्राहीको तर्फबाट र उनीहरुको लागि काम गर्दछन् । आप्रवासन सम्बन्धी राय, सुझाव दिने समेत उनीहरुको कार्यक्षेत्र हो । अष्ट्रेलियामा यस्ता माईग्रेसन एजेन्टहरु माईग्रेसन एजेन्ट दर्ता प्राधिकरणको कार्यालयबाट नियमन हुन्छन् । यो कार्यालयले लायक र उचित व्यक्तिमात्र दर्तावाला माईग्रेसन एजेन्टका रुपमा स्वीकृत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ र एजेन्टविरुद्ध पर्ने उजुरीहरुको अनुसन्धान गर्दछ ।
कतिपय दर्ता नै नभएका व्यक्तिहरुले वा कारवाहीमा समेत परिसकेका व्यक्तिहरुले माईग्रेसन सम्बन्धी सुझावहरु दिने गरेका घटना यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यो गैरकानूनी कार्य हो । यो दण्डनीय छ ।
तपाईंको सम्पर्कमा आएको व्यक्ति दर्तावाल माईग्रेसन एजेन्ट हो कि होइन ? कसरी थाहा पाउने त ? यो एकदमै सजिलो छ । तपाईंले www.mara.gov.au मा गएर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ देखाएका व्यक्तिहरु मात्रै आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका एजेन्टहरु हुन् । यस बाहेक व्यक्तिहरुले दिने परामर्श गैरकानूनी हो ।
तपाईंलाई यदि कुनै व्यक्तिले माईग्रेसन एजेन्टका रुपमा दर्ता नै नभई सुझावहरु दिइरहेको छ भन्ने लागेको छ भने तपाईंले यो विषय सूचित गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी उजुरी गर्दा तपाईंको भिसा आवेदनमा कुनै प्रभाव पर्दैन । थप जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ –
MARA Information sheetDownload